Ogast 2017 - RayHaber | raillynews
Bilaha: August 2017
Intii aan sugeynay rakaabka ku horyaalla garoonka 'YHT' 'joogsi meeshuu xaaraantimeeyay' bishii hore sababtuna tahay ganaax ku dhow hal kun oo 30 Gar Taxi Stop Taxi Stop 'Waxaan dooneynaa inaan joojino' dalabka ka yimid Madaxweyne Melih Gokcek'ten. [More ...]
IZBAN ayaa u dabaaldegaysa sannad-guuradii toddobaad
Nidaamka xaafadaha İzmir kaas oo aasaaska u ah gadiidka dadweynaha İZmir İZBAN, 7. ka tagay. İZBAN, 50 Agoosto 50 iyadoo lala kaashanayo Boqolkiiba 30-2010 ee Wasaaradda Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo News iyo İzmir Metropolitan Dowlada Hoose [More ...]
Trams ee Samsun waxaa xukuma software qaranka
Maamulaha guud ee SAMULAŞ A.Ş Maamulaha guud Kadir Gürkan wuxuu majaladdayada u sharraxay maalinta 1 ee SAMULAŞ, shirkadda ugu muhiimsan ee gaadiidka magaalada, majalladeena. Kadir Gürkan wuxuu xusey inay ku maareeyaan Nidaamka Tareenka Fudud iyagoo wata barnaamij qaran oo ay soo saareen, iyo Xarumaha Howlgalka [More ...]
Mashruuca line-tareenka xawaaraha sareeya ee u dhaxeeya Murcia iyo Almeria
Iyadoo borotokoolku uu kala saxeexday inta u dhaxaysa Railways-ka Isbaanishka (ADIF) iyo Wasaaradda Hawlaha Guud, dhismaha tareenka xawaaraha dheereeya ee u dhexeeya Murcia iyo Almeria ayaa la go’aamiyay inuu ka bilowdo 2019 isla markaana loo diro adeegga 2023. Iyada oo la dhammaystirayo khadka tareenka xawaaraha dheereeya, magaalooyinka [More ...]
Tareenka ayaa ku faafay gabadh
Degmada Tarsus ee Mersin, Azize Çolak oo ah 62-sano jir ah ayaa si xun loogu dhaawacay shilka tareenka. Daqiiqadahaas ayaa ka muuqday kamaradaha amniga. Dhacdadu waxay ka dhacday xarunta tareenka ee xaafada Yenice. Aqoon la helay [More ...]
Duulimaadyada Hani Arifiye-Pendik ayaa kordhin doona?
Fikri Işık wuxuu shaqsi ahaan u sheegay in 10 uu ku bixi doono safarka 8 sida Abriil. Tareenka midkoodna uma tegin 8, mana jirin wax sharaxaad ah. Hal mar tareennada rakaabku waxay ahaayeen dariiqyada ugu muhiimsan ee gaadiidka ee Izmit. [More ...]
BTSO oo soo bandhigtay Wakiilka Ganacsiga u dhow Xarunta 1000
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Bursa (BTSO), bishii ugu horreysay ee 2017 ee 8 ku dhow xubnaha 1000 ee ku dhow barnaamijka caalamiga ah ee 30'a. Gudoomiyaha Gudiga Agaasimeyaasha BTSO İbrahim Burkay, ururada dibada [More ...]
Maalinta Koowaad ee Ciidda ee Malatya Free
Go'aanka Dawladda Hoose ee Magaalada Malatya maalinta koowaad ee Ciidul Adxaa waxay noqon doontaa lacag la’aan dhammaan basaska iyo taraamyada maalinta koowaad ee gaadiidka dadweynaha, xabaalaha, gaar ahaan dhammaan khadadka Malatya oo dhan. [More ...]
Tareenka 2 ayaa ku dhacay Tarsus! Makaaniku wax yar ayuu ku dhaawacmaa
Marka loo eego macluumaadka la helay, tareenka xamuulka xNUMX ee Tarsus ilaa Adana wuxuu isku dhacay tareenka xamuulka xNUMX ee Adana dhanka isgoyska Kamberhöyüğü. Makaanik fudud oo ka boodaya tareenka shilka galay [More ...]
Gaadiidka Dadweynaha ee Konya 1. iyo 2. Maalin Bilaash ah, 3. iyo 4. Maalinta Maalinta 50 Yareeyaa
Duqa Magaaladda Konya ee Tahir Akyurek, basaska iyo taraamyada maalinta koowaad iyo labaad ee xafladda oo lacag la’aan ah, qiimo dhimis 50 ah maalmaha saddexaad iyo afaraad, ayuu yidhi. Duqa Magaalada Konya [More ...]
20 kun oo rakaab ah 720 ayaa maalin kaste u dhaqaaqay Akcaray
Khadkan Akçaray Tram, oo ay maamusho TransportationPark, oo ah shirkad hoos timaada Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli ayna jecel yihiin dadka Kocaeli, ayaa la kulmaya xoog. 1 Agoosto 2017 celcelis ahaan celcelis ahaan 18 kun oo rakaab ah ayaa lagu xareeyay fagaaraha Akçaray [More ...]
Basaska rasmiga ah ee basaska iyo taraamka ee Antalya
Basaska taarikada ee rasmiga ah ee Dawladda Hoose ee Magaala Weyn waxay muwaadiniinta si xor ah ugu qaadi doontaa xafladda taraafikada taraafikada ee ay la socdaan Antray. Dowlada hoose ee Antalya, muwaadiniinta shacabka ah si ay u fuliyaan dhaqankii gaadiidka dadweynaha oo lacag la’aan ah si loo hubiyo in muwaadiniintu ay si bilaash ah u fuliyaan. Metropolitan [More ...]
Maanta taariikhda: 31 August August 2016 Darajada koowaad ee imtixaanka Keçiören Metro Date
Fasaxyada waa la iibiyaa!
Maalmo yar ka hor Xilliga Ciidda, muwaadiniinta doonaya inay aadaan guryahooda iyo meelaha fasaxa ah waxay door bidayaan basaska, tareenada xawaaraha sare leh iyo tikidhada diyaaradaha. Maalmo ayaa u haray Ciidul Adxaa [More ...]